Ibali eliyinyani le-Little Mermaid, ibali likaHans Christian Andersen | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Ababhali, I fantasy, iintlobo, Amabali
Eyona Mermaid encinci.
Le ntsomi yapapashwa ngo-1837 eCopenhagen. Umbhali wayo yayinguHans Cristian Andersen, wayedume ngexesha lakhe kumabali abantwana bakhe, phakathi kwawo, ukongeza Intombazana encinci, Idada elibi, uKumkanikazi weKhephu nabanye abaninzi.
Umdlalo usibonisa ibali le-mermaid encinci ethandana nomntu kwaye kuhambo lwakhe uhamba kwiimeko ezingapheliyo. Ibali, ngokwalo, likude lee kunale nto basivezela yona kwimiboniso bhanyabhanya kwaye iza nemiboniso iDisney ayinakulinga ukuyibonisa kwinqanaba nasemaphupheni. Okwangoku abalandeli be UHans Cristian unokufumana amahlelo amatsha axabisekileyo amabali akhe.
1 Isuntswana lombhali
1.1 Ubuntwana kunye nolutsha
2.1 Isenzo sokuthandana
2.2 Intlungu yokuhamba
2.3 Ukufa nethemba
Ubuntwana kunye nolutsha
UHans wazalwa ngo-Epreli 2, 1805 kwisixeko saseOdensa eDenmark. Unyana womenzi wezihlangu, wafunda imisebenzi emininzi ngokulula, kodwa akazange azinze kuyo nayiphi na into. Xa wayeneminyaka eyi-14, wabaleka nemali encinci kwilizwe lakhe.
Enkosi kwitalente yakhe yokubhala, abanye abalinganiswa abaziwayo bexesha bathathe isigqibo sokuthatha imfundo yabo. UAndersen wayeziva ukuba imvelaphi yakhe ehluphekileyo yayililitye kwindlela yakhe ngoko ke wayecinga ukuba wayengunyana ofihliweyo nolahlekileyo wenkosi yemali enkulu.
UHans Cristian Andersen wayeyimbongi kunye nombhali webali elifutshane, wakhupha neencwadi zokuhamba ezinje Indawo yokuthengisa imbongi, eyayiyincwadi yakhe ende. Nangona kunjalo, umsebenzi wakhe wokubalisa amabali yayiyeyona nto inomtsalane, wabhala malunga namabali ali-168.
Uninzi lwala mabali lwaba ziiklasikhi kwaye namhlanje zisafundelwa abancinci. Ngokungafaniyo namabali amaninzi exesha eligcwele ubumnyama nokufa, iimbali zikaAndersen zazidla ngokuba neziphelo ezinethemba, ngandlela thile.
Ixelela ibali lentombazana encinci xa ithe yagqiba iminyaka eli-15 ubudala ivumelekile ukuba inyuke iye phezulu ukuze ijonge abantu. Phambi kokuba aye kwigumbi eliphezulu, utata wakhe umkhumbuza ukuba unokujonga kuphela, kuba akanamphefumlo ongunaphakade njengowabantu.
Xa ekugqibeleni enyuka esiya kubona yonke into engaphezulu, isaqhwithi siyazika inqanawa yenkosana entle, ayisindisileyo. kwaye uyishiya elunxwemeni nje ukuba iqinisekise ukuba ikhuselekile. Uwa ephambana eluthandweni kwaye undwendwele iNkosazana yaseGodini ukuze icele imilenze emibini.
Caphulelwa nguHans Chistian Andersen.
Igqwirha limxelela ukuba umlingo unokuphoswa ngelizwi lakhe elihle, kwaye ukuba inkosana ayithandani nayo kwaye itshate nomnye umntu, izakufa. ekuzeni kokusa emva komtshato kujike kube ligwebu. Ukwalumkisa ngelithi inyathelo ngalinye alithabathayo ngemilenze yakhe emitsha liyakuba buhlungu njengezigidi zamakrele atyibilika eluswini ade ophe.
Intombazana encinci ikhasa elunxwemeni kwaye ithathe isigqibo. Inkosana iyamfumana kwaye igqibe kwelokuba imkhathalele, kodwa ikwavuma ukuba yathandana nomnye Intombazana, leyo ucinga ukuba yamhlangula kuqhekeko lwenqanawa. Okokugqibela, uyakwazi ukutshata naye, le mermaid kabuhlungu omncinci ugqiba ukuba alinde ukufa kwakhe kusasa.
Oodadewabo batyelela igqwirha ngenjongo yokugcina udade wabo omncinci., kwaye ngokutshintshiselana ngee-manes zabo ezinde ubanika ikrele ekufuneka lisetyenziswe ngu-Little Mermaid ukubulala inkosana.
Uyangena egumbini lomtshato, kwaye xa embona elele ngoxolo ugqiba kwelokuba angambulali, kuba usamthanda. Ke uziphosa elwandle, elungele ukuba ligwebu, kodwa emva koko imimoya yomoya yammema ukuba abe yinxalenye yabo, ukuze emva kweminyaka engama-300 besenza okuhle emadodeni bafumane umphefumlo ongunaphakade.
Njengazo zonke ezinye ezakudala, iDisney yathatha iyelenqe leli bali labantwana laza labanika ubuso obutsha. awayecinga ukuba ilungile kuluntu lwanamhlanje.
Nangona kunjalo, isixa se Utshintsho olwenziwe kwiDisney kwimbali yantlandlolo yenza ukuba imovie ibe yimbali eyahluke ngokupheleleyo. Ukuthelekisa i-Danish Little Mermaid kunye ne-American Ariel kuya kuba kungalunganga kwaphela, amaxesha abo, amabali kunye nezinye iinkcukacha zenza ukuba ibali ngalinye lihluke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Eyona mermaid yokwenyani
Ngokuqinisekileyo ndinamathela kwibali lasekuqaleni